We Fight We Win. -- " More than Media ": ---------------------------------------စိန် တွေ တောက် တဲ့ ည ( မိုးသီးဇွန် )---------------------
---------------------------------------စိန် တွေ တောက် တဲ့ ည ( မိုးသီးဇွန် )---------------------
ဒို့ တွေ စိန်ဖြစ်ဖို့
အစွန့်လွှတ်ဆုံး တမ်းတခြင်း ဆိုတဲ့
အိုဒက်ဆ (Odysseus) အပြန်ကို
ပဲနယ်လ်လိုပီ (Penelope) က ယုံကြည်စွာစောင့်ဆိုင်းသလိုမျိုး
ငါဒို့ အားလုံး လက် ချိုးစောင့်မျှော်နေကြရဲ့။
သစ္စာဖေါက်နဲ့ အချောင်သမားတွေ များလေပဲ။
ငါဒို့ မီးတချက် ထ မတောက်လို့သာ
အသံတိတ်ငိုနေရတဲ့ ညတွေကို ခ၀ါချဖို့
တစ် … လှောင်စာအပြည့်နဲ့ အမုန်းတွေကို ဖေါက်ခွဲချ၊
နှစ် … နာကျင်မှုတွေကို မြေမြှုပ်ရဲကြဖို့၊
သုံး … ရင်ခုန်သံတွေ တူညီနေကြဖို့ ပါပဲ။
မုန်တိုင်းများက အငြိုးတကြီး သတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
အံတုဖို့ ငါ ဒို့ ထွက်လာပြီ။
ခု၊ ဆယ၊် ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်း၊ သန်း
( အလင်းရှာဖွေနေသူများကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။ )
လေးစားပါတယ် နောင်တော်ကြီး ကိုမိုးသီးရေ... အဆိုးမြင်သမားတွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်ကြပါစေ.... နောင်တော် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက် ကျွန်တော်တို့ မျိူးဆက်သစ်ကျောင်းသားတွေ ဂုဏ်ယူနေပါတယ်.... ကိုမိုးသီးအပေါ်မှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရ မတရား ချမှတ်ထားတဲ့ သေဒဏ် ကြိူးမိန့်ကို မကြာတော့မယ့်ကာလမှာ သမ္မတကြီးက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေပါတယ်..... ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီး ပြည်တော်ပြန်ပြီး နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြည်သူ့အကျိူး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာ.......
We wish to highlight the RIGHT HISTORIC ANSWER of CURRENT SITUATION to understand.
The following are so called “INFRASTRUCTURE WORK” for the OPERATION OF SOCIATY.
1)Above the ground Electrical Distribution System
2)Underground Sanitary System
3)Underground Drainage System
4)Above the ground and underground Drinking Water Supply System
5)City/Town Fire Fighting System (eg. Providing Pillar Hydrant and under ground water pipe line in each and every of main road)
6)Rubbish/Debris Cleaning System & Facilty. (eg. Municipal Office/Group/Council : (a)Arrange and carry out cleaning Rubbish at Main Road, Market ,Drain & Plublic Hall …etc (b) Provide
Rubbish Carrier Truck…..etc)
7)Construction of road/lane in town.
A Good Government has to carry out the above-mentioned “INFRASTRUCTURE Work” REGULARLY in EACH and EVERY of city/town through out the country.
But Military Government failed to carry out the works for 50 years since 1962 at the time of JUNTA,NE WIN.
NOW the CITIZENS ARE FACING THE 50 YEARS HUGE DEBT GIVEN BY JUNTA, NE WIN and HIS NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTERS.
In other words, we can say that……
The living standard of the country is going down deeper and deeper with great acceleration and momentum due to the IMPACT OF 50 YEARS MISTAKES OF WRONG POLITICAL SYSTEM and WRONG ECONOMIC SYSTEM SET UP BY JUNTA,NE WIN and FOLLOWED UP BY HIS NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTERS
TO RECOVER BACK THIS 50 HUGE DEBT,
-FIRST, the RULING SYSTEM of GOVERNMENT must be TOTALLY TO BE CHANGED(UNDER ONE ROOF of DEMOCRACY)
-SECOND, the NEW GOVERNMENT HAS to REBUILT THE COUNTRY for at least 10 to 15 years .
DEFINITELY the 50 YEAR HUGE DEBT CAN NOT BE RECOVERED BACK WITHIN A FEW YEARS even the right government do the right things with the great effort day and night.
(We requested some one,please translate into Burmese)
I really appreciate Poet's effords because Poem gave us various thoughts.
26 May 2012 at 06:23
ကိုမိုးသီး ကျွန်တော်ကြည်လွင်ပါ စောထစခန်းကပါ
ကိုမိုးသီးနဲ့ဆက်သွယ်ချင်လို့ အီးမေးပေးခဲ့စေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်အီးမေးက kokyilwin88@gmail.com